Sweden oo ay maanta ka dhaqangeleyso shahaadada tallaalka Covid & shuruudaha ay ku waajibayso (Dhegeyso) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Sweden oo ay maanta ka dhaqangeleyso shahaadada tallaalka Covid & shuruudaha ay...
Sweden oo ay maanta ka dhaqangeleyso shahaadada tallaalka Covid & shuruudaha ay ku waajibayso (Dhegeyso)
(Hadalsame) 01 Dis 2021 – Wixii maanta ka bilowda, waxaa qofkii tegaya meel ay iskugu imanayaan ugu yaraan 100 qofood lagaga baahan yahay shahaadada tallaalka cudurka Covid-19 ee caddaynaysa inuu qofku wada qaatay labada tallaal.
Meelaha shuruuddaasi ka shaqaynayso waa sineemooyinka, tiyaatarrada, ruwaayadaha, dhacdooyinka ciyaaraha, meelaha lagu caweeyo iwm.
Dadka shuruudahani khuseeyaan waa wixii ka wayn da’da 18-jirka oo laga doonayo caddaynta tallaalka, ama tijaabo muujinaysa inuusan cudurka qabin, waxaa kale oo la aqbalayaa qofkii kasoo bogsadey cudurka Covid-19.
Waxaa kale oo la aqbalayaa qofkii keena caddayn dhakhtar oo muujinaysa inay jirto sabab caafimaad oo aan u saamaxaynin in uu tallaalka qaato.
Previous articleMessi ama Ronaldo kee ayuu Sergio Ramos xalay ku taageeray inuu hanto Ballon D’or?!!
Next articleShuruudaha cusub ee uu Sucuudigu uga baahan yahay qofkii doonaya inuu soo Cumraysto (Dhegeyso)